Ghostwriter Theology I Waxaan kuu qoreynaa waraaqahaaga waraaqaha waraaqaha
, 16: 11
Qorayaashayagu waxay leeyihiin khibradda lagama maarmaanka u ah fiqiga
Daraasaadka Diinta iyo Fiqiga wuxuu ka hadlayaa diimaha kala duwan, asalka iyo dhaqanka diinta. Waxaa jira qoraallo iyo buugaag badan oo ay tahay in si buuxda loogu barto qalbiga. Taasi waxay u baahan tahay waqti iyo tamar badan. Ma jiraan wax waqti ah oo uga haray sharraxaadyada sida shahaadada bachelorka ama mastarka. Iyo shaqo cilmiyaysan oo ku qoran "dhinaca" ma buuxin karto heerarka tayada ee jaamacaddu u baahan tahay. Waxaan kaa caawin karnaa xaaladan cakiran oo waxaan qori karnaa waraaqahaaga muddada, waraaqaha muddada iyo tusaalooyinka. Si fudud hadda nala soo xiriir oo noo soo dir email. Sidoo kale waa lagusoo dhaweynayaa inaad nala soo xiriirto bilaash dib u xusuusasho na shaqaalee si aan dib kuugu soo wacno. Dib-u-soo-wicitaankeennu wax lacag ah kuugu kici maayo. Waxaan kaala hadli doonnaa dhammaan faahfaahinta shaqada. Tan waxaa ka mid ah cinwaanka, qaab-dhismeedka iyo qaab-dhismeedka shaqada. Waxaad sidoo kale naga heli kartaa a tababar bilaash ahhaddii aadan wali hubin mawduuca shaqadaada. Ka dalbo shaqadaada dhammaystiran qoraaga ghostwriter - si taxaddar leh iyo 100% waqtigeeda. Inta lagu guda jiro barashada cilmiga diinta, imtixaano badan ayaa laga gudbaa, kuwaa oo qaar aad u adag. Kuwaas waxaa ka mid ah maadooyinka soo socda:
Kitaabka Quduuska ah ee macnaha guud ee taariikhiga ah
Hordhac fiqiga nidaamsan iyo wax ku ool ah
Su'aalaha falsafad aasaasiga ah
Adduun iyo nin sidii Eebbe uumay
Axdiga Hore iyo Cusub
Dogmatics ee Kaniisadda Christian
Waxaan sidoo kale ka shaqeyn karnaa shaqadaada waraaqdaada ereyga tacliimeed marka laga eego aragtida su'aasha falsafada. Dhacdo ahaan, falsafada sidoo kale waa mowduuc inta badan la isweydiiyo. Ardayda ka socota maadooyinka taariikhda, daawo, tahay, cilmiga bulshada iyo Cilmi-nafsiga si farxad leh u aqbal dalabkeenna ghostwriting. Adiga ayaa sameyn kara Shaqada guriga, Qoraal iyo Warqad aqoon kororsi ah qor. Goobaha ay lagama maarmaanka u tahay, waxaan ku saxeynaa kuna balaarineynaa shaqadaada.
Qorayaashayada ruug-caddaaga ah ee ku takhasusay cilmigaaga waxay leeyihiin waayo-aragnimo sannado badan gudaha ah waxayna kaa caawin karaan shaqadaada. Aqoontaada waxay ku abuureen waraaqo aad u wanaagsan oo ku caawin kara.
Qormooyinka qoraalka ee fiqiga
Qoraallada waxaa qorey qormadeena khibrada leh. Qorayaashayadan cirfiidka ah ayaa diyaar kuu ah isla markaana si dhakhso leh ayaan kuu taageeri doonaa. Waxaan ku faraxsanahay inaan ka caawinno ardayda barashada cilmiga diinta inay qoraan casharradooda iyadoo loo eegayo shaqsiyaadka u gaarka ah tacliinta iyo cilmiga sayniska. Xirfadaada waxbarasho waxay muhiim noo tahay. Ujeeddadeennu waa inaad ka soo bixi karto shuruudaha sayniska ee maadadaada.
Fiqiga ee cilmi baarista
Waxa kale oo jira qodobo badan oo ku jira aaga aad ku shaqeysid cilmi baarista oo aan wali la cadeynin oo leh duleello cilmi baaris Gaaritaanka qiimaha cilmiga ah ee la kordhiyay ayaa macquul ka ah qeybaha kala duwan ee cilmi baarista ee barashada diinta, laakiin waxay ku lug leedahay shaqo badan. Hada mid samee baaritaan, waan ku taageersanahay.
Rajada xirfadeed ee fiqiga
Waxaad haysataa dhowr ikhtiyaar oo aad ugu adeegsato aqoontaada shaqadaada. Tusaale ahaan, waxaad ka shaqeyn kartaa waxbarashada diinta ee iskuulada, joogi kartaa jaamacadda oo waxaad sameyn kartaa cilmi-baaris dheeraad ah, ama ka shaqeyn kartaa kaniisadda. Laakiin waa si sax ah aqoonta aasaasiga ah ee aasaasiga ah ee u fureysa albaabbo badan oo badan ardayda fiqiga markay qalin jabiyaan ka dib: shaqada suxufinimadu waa sida ugu macquulsan ee looga shaqeeyo siyaasadda ama shirkadaha la-talinta. Go'aanso waddada kugu habboon. Waxaan ku faraxsanahay inaan kaa caawinno go'aanka oo aan kugula soconno jidka annaga oo kaa caawinna!
Aagga fiqiga ee kaniisadaha
Haddii aad si guul leh uga soo baratay barashada diinta ama fiqiga, tusaale ahaan, waad ka shaqeyn kartaa wadaad ahaan ama waxaad ka sii wadi kartaa baaritaanka jaamacadda. Shaqadaada hadda si toos ah nooga dalbo. Waxaad badbaadinaysaa waqti iyo dadaal!
Hubinta tayada ee cilmiga diinta